डा सन्दुकलाई भारतले दियो पद्यमश्री पुरस्कार, अरु को को पुरस्कृत ? | mulkhabar.com
डा सन्दुकलाई भारतले दियो पद्यमश्री पुरस्कार, अरु को को पुरस्कृत ?
January 27, 2018 | 9:37 pm 277 Hits
नेपालका वरिष्ठ चिकित्सक डा सन्दुक रुइतलाई भारतले प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ । नेपाली आँखा चिकित्सक डा सन्दुक रुइतलाई भारत सरकारले सस्तोमा मोतियाबिन्दूको शल्यक्रिया गर्ने खोज र सस्तो दरमै मोतियाबिन्दुको उपचार पछि प्रयोग हुने लेन्स निर्माणका लागि सम्मानित गर्दै पद्मश्री पुरस्कार दिएको जनाएको छ।
उनको खोजले मोतियाबिन्दूको शल्यक्रियाको शुल्क ९० प्रतिशतसम्मले कम भएको र ३० भन्दा बढी देशहरूमा लेन्स निर्यात गर्ने गरेको पुरस्कार दिनेबेला भारतले उल्लेख गरेको छ।
तिलगंगा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा रुइतले सन् २००६ मा म्याग्सेसे पुरस्कार पाएका थिए । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा जन्मे हुर्केका उनी सुरुमा दार्जिलिङको मिसनरी स्कूल सेन्ट रोबट्र्समा पढेपछि एसएलसीसम्म काठमाडौंका सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए।
त्रिचन्द्रमा आइएससी पढेपछि छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस पढ्न भारतको लखनऊस्थित किङ जर्ज मेडिकल कलेज पुगेका डा रुइत एमबिबिएस पास गरेपछि नेपाल फर्केर वीर अस्पतालमा तीन वर्ष सेवा गरेका थिए। फेरि भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स०मा एमडि गरेका हुन् ।
अरु कोको भए सम्मानित ?
केराला डा एमआर राजाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै पद्मश्री पाएका छन् उनलाई गम्भीर अवस्थाका बिरामीको गुणस्तरीय जीवनका लागि पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उक्त पुरस्कार दिइएको हो । दुखाइ रहित नियोनेटल सर्जरीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उनले भारतमै पहिलो ‘पेल्लिएटिभ केयर युनिट’ तयार पारेका थिए ।
यसैगरी दक्षिण भारतकै कमाटकाकी सुलुगट्टी नरसम्मालाई कृर्षी मजदुरलाई प्रसूति सेवा दिए बाफत पुरस्कार दिइएको हो । औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नलिएकी उनले परम्परागत रुपमा सिकेको सीपका आधारमा निःशुल्क प्रसूति सेवा दिएकी थिइन् । ९७ वर्षीया उनलाई तमकुर युनिभर्सिटीले मानार्थ पिएचडी दिएको छ ।
यसैगरी साउदी अरेबयिाका पहिलो प्रमाणित योगा इन्स्ट्रक्टर नोउफ मरवाईले पनि पद्मश्री पाएकी छिन् । उनले साउदीमा ७० भन्दा बढी योगाका शिक्षक उत्पादन गरेकी छिन् भने ३ हजारलाई योगा सिकाएकी छिन्।
तमिल नाडुकी ९८ वर्षकी भी नानाम्मल भारतकी सबैभन्दा वृद्धा योगा शिक्षिका हुन् । उनले योगामा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै पुरस्कार पाएकी छिन्। हिमाञ्चल प्रदेशका ९० वर्षीय यसी ढोडेनले गुम्बामा उपचार सेवा दिए बाफत पद्मश्री पाएका छन्। कुष्ठरोग नियन्त्रणमा जीवन लगाएका ८२ वर्षीय दामोदर गणेश बापतले पद्मश्री पाएका छन् ।
परम्परागत चिकित्सा मार्फत् विष नियन्त्रण गर्ने औषधिका लागि लक्ष्मीकुट्टीले पुरस्कार पाएकी छिन् । उनले सर्पले टोकेका हजारौं बिरामीको उपचार परम्परागत चिकित्साको सहयोगले गरेकी छिन् । परम्परागत रुपमा उपचारका लागि प्रयोग भइरहेका ५ सय भन्दा बढी औषधि सम्झेकी छिन् । ग्रामिण क्षेत्रमा उपचार सेवा दिएकाले डा रानी र अभय बांग पुरुस्कृति भएका छन् । उनीहरुले जीवनका ३० वर्ष महाराष्ट्रको ग्रामिण इलाका गडचिरोलीमा उपचार सेवा दिएर बिताएका छन्।
सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै पद्मश्री पुरस्कार सुभाषिनी मिस्त्रीलाई दिइएको छ । जसले तरकारी बेचेर गरिबका लागि अस्पताल बनाएकी छिन्। पश्चिम बंगालकी सुभाषिनीले उपचार नपाएर श्रीमानको मृत्यु भएपछि अस्पताल बनाउने सपना देखिन् । जुन उनले तरकारी बेचेर र जुत्ता पालिस गरेर कमाएको पैसाले पूरा गरिन्। -स्वास्थ्यखबरबाट
आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या, कसरी हुन्छ उपचार ?
डा. सुमनविक्रम अधिकारी/ आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । धेरैलाई यस्तो समस्या पनि हुन्छ र भन्ने लाग्न…